Fialan-tsasatra lehibe :: Mbola vitsy ireo olona misafidy hiala ny renivohitra • AoRaha
Fialan-tsasatra lehibe Mbola vitsy ireo olona misafidy hiala ny renivohitra
Vitsy ireo olona tapa-kevitra ny ho any amin’ny faritra ankehitriny na dia efa misy aza ireo sekoly tsy miankina no tafiditra ao anatin’ny fialan-tsasatra lehibe. Nambaran’ireo mpitatitra fa anisan’ny mitarika ny fahivitsian’ny olona mandeha miala sasatra noho ny halavan’ny fotoana hianaran’ny mpianatra.
Etsy an-danin’izay, heverin’izy ireo fa mety hihena raha oharina tamin’ny taon-dasa ny isan’ireo mpiala sasatra satria mety ho fohy ny fotoana tsy hianaran’ireo mpianatra ka tsy hanana vola sy fotoana hanaovana fialan-tsasatra ny fianakaviana.
“Vitsy ireo olona mandeha miala sasatra. Ireo mpivarotra sy mpandeha tsy maintsy mivezivezy no tena mameno ny fiara. Olana mampihisatra ny fivezivezen’ny olona, ohatra, ny fahalavan’ny fotoana hianaran’ireo ankizy nefa misy sahady ireo tsy maintsy hianatra amin’ny volana oktobra. Mety efa tsy mieritreritra ny handeha hiala sasatra lavitra intsony ireo ray aman-dreny satria manomana sahady ny taom-pianarana vaovao 2019-2020”, hoy i Rodolphe, mpitazona kaoperativa, etsy Ambodivona.
Notsindriany fa tsy miova ny isan’ny fiara mandeha, amin’izao fotoana izao. “ Fiara roa isan’andro ihany no fenoina isan’andro raha ny mihazo an’i Toamasina. Ny iray mandeha maraina. Miainga hariva kosa ny iray hafa. Ireo aza matetika efa tena ela vao feno satria vitsy ireo mpandeha”, hoy ny fanampim-panazavan’i Rodolphe.
Nohamafisin’ireo mpitatitra kosa fa tsy mampiakatra saran-dalana izy ireo na vitsy aza ny mpandeha. “ Efa voafetra avokoa ny saran-dalana rehetra. Tokony ho roa alina ariary hatrany ny avy eto Antananarivo mankany Toamasina. Ny olona no matetika miady varotra ka rehefa hampiharina ilay saran-dalana tena izy dia heverin’izy ireo fa mampiakatra saran-dalana izahay”, hoy ny mpitatitra iray hafa.
Fotodrafitrasam-pampianarana Hitohy amin’ny taona 2020 ny fananganana oniversitem-panjakana
Fitohanan’ny fiara Nampikorontana ny fifamoi­voizana ny fanamboaran-dalana
Famoronana Hoentanina amin’ny fikarohana ny ankizy
Fitsaboana zaza Nahazo fitaovana tena ilaina ny hôpitaly Befelatanana
Tontolon’ny asa :: Olana goavana ny tsy fananana asa eo amin’ny tanora
Toetrandro :: Ho maina ny andro manomboka anio
Baolina kitra – CAN 2021 Misokatra amin’ny rehetra ny fampivondronan’ny Barea
Razana roa sosona Novonoin’ny fokonolona ilay lehilahy nahafaty ny vadiny